Ngaba i-Hydrofrofluoric Acid (HF) i-Acid okanye i-acid Acid?
Ngaba i-HF (Hydrofluoric Acid) i-Acid Acid okanye i-acid Acid?
I-Hydrofluoric acid okanye i-HF yingozi kakhulu ye-asidi. Nangona kunjalo, i- asidi ebuthakathaka kwaye ayikho i-asidi eqinileyo kuba ayinakuhlukanisa ngokupheleleyo emanzini (leyo yintetho ye- asidi eqinile ) okanye ubuncinci kuba ion iifom kwi-dissociation zibophelele kakhulu ukuba senza njenge-acidi eqinile.
Kutheni i-Hydrofrofluoric Acid i-acid Acid
I-Hydrofluoric acid iyona kuphela i-hydrohalic acid (efana ne-HCl, i-HI) engekho i-asidi eqinile.
I-HF ionika kwisisombululo esinamandla njengezinye iicidi:
HF + H 2 O H H 3 O + F -
I-Hydrogen fluoride iyayichitha ngokukhululekile emanzini, kodwa i-H 3 O + kunye ne-F - ion zithandwa kakhulu kunye kwaye zakha isibini esinyeneyo, H 3 O + · F - . Ngenxa yokuba ion hydroxonium ifakwe kwi-ion i-fluoride, ayikho inkululeko yokusebenza njenge-asidi, ngaloo ndlela iyanciphisa amandla eHF emanzini.
I-Hydrofluoric acid i-asidi enamandla kakhulu xa igxininiswe kunokuba ihlaziye. Njengoko ingxube ye-hydrofluoric acid ifikelela kuma-100 ekhulwini, i-acidity iyanda ngenxa yokuqhathaniswa kwe-homoassociation, apho i-base kunye ne-conjugate acid yakha i-bond:
3 HF H H 2 F + + HF 2 -
I-FHF-bifluoride anion igxininiswa ngumbutho oqinileyo we-hydrogen phakathi kwe-hydrogen kunye ne-fluorine. I-constant ionization ye-hydrofluoric acid, eyi-10 -3.15 , ayibonakali i-acidity yinyaniso yezixazululo ze-HF. Ukubambisana kwe-Hydrogen kwakhona kubangelwa indawo ephezulu yokubilisa yeHF xa kuthelekiswa nezinye i-hydrogen halides.
Ngaba iHF Polar?
Omnye umbuzo oqhelekileyo malunga nekhemistri ye-hydrofluoric acid kukuba ingaba i-molecule ye-HF i-polar. Ubuhlobo beekhemikhali phakathi kwe-hydrogen kunye ne-fluorine yintlambo ye -polar covalent apho i-electron i-covalent isondele ngakumbi kwi-electromagnetic fluorine.
Kutheni Umlambo Uvutha Ngaphansi Kokukhanya Okumnyama?
Imizekelo ye-10 Abaqhubi bamandla kunye nabashumayeli
Izidlo zePH Izikhokelo zeTragram yombala
IMithetho yeOlimpicchasese Rules
I-Lakeview Gusher of 1910 enkulu, engekho ngakumbi, kunokuba i-BP i-Oil Spill
Iintshukumo zeenqwelo zeBhola: I-Curving Left
Ixabiso leMigodi yeGolide le-Olimpiki lingakanani?
Iifrimu zeHayao Miyazaki kunye ne-Studio Ghibli
Ukusebenzisa inxaxheba kwiJamani njengeziJongano kunye neZilumkiso
Yayiphi i-Caliphate yase-Umayyad?
I-HDI-I-Index yoPhuhliso lwaBantu
Ukuxhamla kwiJava: Inkcazo kunye nemizekelo